Bogga ugu weyn Dib -u -eegista Freelancer.com 2022: Ma Sameyn Karaa Mise Waa Fadeexad?
Haddii aan dooneyno inaan sameyno liiska goobaha xorta ah ee ugu sarreeya adduunka, Freelancer.com waxay ka mid noqon doontaa kuwa ugu sarreeya 10. Goobtu waxay leedahay in ka badan 41 Milyan oo isticmaaleyaal diiwaangashan, qiyaastii 16 milyan oo shaqo la soo dhejiyay, iyo celcelis ahaan qiimeynta 5-xiddig… micnaheedu waa 5 QIIMAYNTA XIDIGAHA! Waxay u muuqataa mid aad u wanaagsan in run la noqdo?
Iyada oo tirooyinkan maskax-kicinta leh, mid ayaa iska diiwaangelin kara isagoo illoobaya in goobo kale oo madax-bannaan sida Upwork iyo Fiverr ay jiraan. Hagaag, aan aragno haddii Freelancer.com runtii u qalanto buunbuunin.
Shaqada iskii u shaqeysta waa hab fiican oo lacag looga kasbado dhinaca, la dhiso faylal shaqo oo leh rajo ah in meel kale oo joogto ah laga helo.
Shaqaalaha iskood u shaqeysta waxaa sidoo kale loo yaqaanaa shaqaale kale (shaqaale aan haysan shaqo joogto ah ama joogto ah hal shaqo -bixiye).
Sida laga soo xigtay sahan ay samaysay Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha ee Maraykanka 2005 iyo 2017, shaqaalaha beddelka ahi waxay ka yihiin 10% shaqaalaha qaranka.
Shaqaale-yaqaanka xorta ah, waxaad hiwaayaddaada u rogi kartaa il dakhli, u shaqayso inta ugu yar ama inta aad rabto iyada oo aan lagu mashquulin shaqo waqti-buuxa ah sida shirarka, siyaasadda xafiiska, mashquulinta xafiiska,
Iyada oo Freelancer.com lagu taxay mid ka mid ah bogagga ugu madax -bannaan, hubaal waad ka faa'iideysan doontaa wax badan taas oo ah, haddii madalku sharci yahay.
Waa maxay Freelancer.com?
Freelancer.com waa degel -ka -bax iyo goob -dadweyne halkaas oo loo -shaqeeyayaashu ku shaqaaleysiin karaan shaqaale madax -bannaan si ay uga shaqeeyaan shaqooyin kala duwan. Waa mid ka mid ah suuqyada xorta ah ee ugu sarreeya halkaas oo aad ka heli karto shaqooyin badan laakiin laguu shaqaaleysiin doono waxay ku xiran tahay aqoontaada shaqada.
Adigoo wata Freelancer.com, waxaad ku dhejin kartaa shaqo aad u baahan tahay si aad u dhammaystirto oo aad dalabyo tartan ah uga hesho shaqaalaha madaxa -bannaan daqiiqado gudahood. Waxaad ka heli kartaa kartida aad u baahan tahay si aad u qabato shaqooyin kala duwan sida garaaf/naqshadeynta astaanta, suuqgeynta, gelitaanka xogta, naqshadeynta mareegaha, iyo qaar kaloo badan. Suuqa waa mid aad u ballaaran si aad had iyo jeer u hesho qofka ku habboon mashruucaaga.
XIDHIIDHKA: Amazon Prime ma ka fiicantahay Netflix sanadka 2022? Khibradeyda
Intaa waxaa sii dheer, Freelancer.com waxay hubisaa in shaqaalaha madaxa -bannaan la ilaaliyo. Waxaad la socon kartaa kireystayaashaada shaqo -bixiye ahaan sidoo kale waxaad joogteyn kartaa xiriir joogto ah oo lala yeesho la -shaqeeyahaaga shabakadda ama barnaamijka moobiilka ee Freelancer.
Iyada oo la bixinayo lacago sugan iyo kumanaan xirfadlayaal dib loo eegay oo laga dooran karo, Freelancer.com ayaa ah habka ugu fudud uguna nabdoon ee shaqada lagu qabto internetka.
Sidee u shaqeeyaa Freelancer.com?
Hoos waxaa ah habka tallaabo-tallaabo ee sida Freelancer u shaqeyso
Booqo Freelancer.com: Saxiix oo samee astaantaada
Markaad dhammaystirto astaantaada astaanta u tag Shaqo
Eeg Qaybaha: Waxaa jira qaybo badan oo la heli karo si loo xusho qayb kasta sida aqoontaada ah.
Bogga qaybta, waxaad ka heli doontaa mashaariic badan.
Guji 'badhanka dalabka' oo dooro mashruuc kasta oo ku habboon xirfaddaada.
Dhig Mashruuc: Samee astaan ​​-bixiye madax -bannaan oo bilaw dalabka shaqooyinka ay soo dhejiyaan macaamiisha. Soo bandhig ama soo dir soo jeedinno ku saabsan shaqooyinka bannaan ee suuqa Freelancer.com.
Ka shaqee shaqooyinka la aqbalay
Freelancer ka badan 1800 qaybood oo shaqo oo kala duwan.
Astaamaha ugu muhiimsan ee Freelancer.com waa:
Dalabyada Caadiga ah
Daawashada Muunadda Shaqada
Wadahadal Aan Qiimo Lahayn
Shaqaalaynta Bilaashka ah
Bixinta Lacagaha Muhiimka ah
Freelancer waxay leedahay is-dhexgal user-saaxiibtinimo habka diiwaangelintuna waa sahlan yahay. Qofka bilowga ah way u fududahay inuu abuuro koonto.
Waxaad iska diiwaangelin kartaa sida hawl -wadeen shaqo -doon ah, macmiil raadinaya qandaraaslayaal, ama waxaad heli kartaa koonto kuu saamaxaysa inaad qabato labadan hawlood.
Ku dhajinta shaqada Freelancer.com waa bilaash. Si kastaba ha ahaatee, guddiyada waxaa la soo saaraa oo kaliya marka mashaariicda ay aqbalaan madax -bannaaneey oo qiimayaashu waa kala duwan yihiin iyadoo ku xiran nooca shaqada ama baaxadda.
Mashaariicda qiimaha go'an waxay leeyihiin canshuur go'an oo ah 3%. Qiimaha Freelancer.com waxaa lagu heli karaa qorshayaasha soo socda:
Trial Free $ 0.00
Intro $ 0.99 / bishii
aasaasiga ah $ 4.95 / bishii
Plus $ 9.95 / bishii
Professional Wuxuu bilaabayaa $ 29.95 / bishii
Premier $ 59.95 / bishii
Freelancer.com guud ahaan waa mid la adeegsan karo, dabacsan, oo la isku halleyn karo. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn kuwa soo socda:
Loo -shaqeeyayaashu waxay la xiriiraan shaqaalaynta iman kara: Freelancer.com waxay kuu oggolaaneysaa inaad si toos ah ula sheekaysato shaqaalaha madaxa -bannaan si aad u hesho warar joogto ah oo ku saabsan horumarka shaqadaada.
Bixinta sugan: Freelancer.com waxay hubisaa in macaamilka mareegaha uu yahay mid sugan oo la ilaaliyo. Waxaad bixisaa shaqada marka la dhammeeyo oo aad ku qanacdo 100%.
Nidaamka taageerada weyn: Freelancer.com waxay bixisaa adeeg 24/7 ah
La soco oo la socodsii waqtigaaga raadiyaha, iyo abka moobiilka.
Raadinta goobta ayaa loo habeeyay si ay uga caawiso loo -shaqeeyayaasha inay yareeyaan liisaska rajadooda.
Ma Freelancer.com Been baa mise waa sharci
Freelancer wuxuu noqon karaa mid ka mid ah suuqa ugu weyn ee dibedda loo soo dhoofiyo laakiin had iyo jeer maahan tirooyinka. Way ka tayo badan tahay tirada. Eeg waxa adeegsadayaashu ka sheegaan freelancer.com
“Waxay u tahay madal wanaagsan ganacsatada inay helaan khibradooda shaqo. Qof kasta iyo qof kasta oo khibrad u leh khibrad kala duwan. Meel fiican oo internetka ah. ” runtii.com
“Aad baan uga xumaaday inaan arko inaysan xitaa isku dayin inay wax ka qabtaan dhammaan kuwa wax khiyaameeya ee isku daya inay ku gaarsiiyaan inaad qabato shaqo hoos ah. Waxay hore u qaadaan khidmad shaqo oo aadan xitaa ogeyn haddii ay shaqeyn doonto iyo in kale (taasoo i gelisay maskax -dhaaf. Waxaan si taxaddar leh u geli lahaa arrintan. Uma qalmin haba yaraatee. ” runtii.com
“Way naga xidheen oo waxay qaateen lacagteenii iyo lacagtii shaqaalaheena. Waxay sababtay arrin nabadgelyo oo loogu talagalay maareynteena. Ka fogow, kooxda xaqiijinta carruurta. Waan ognahay inaan isticmaalno Peopleperhour iyo Upwork, aad bay uga sii fiican tahay .. Wadaag waxtar leh ” MariusStanley_trustpilot.com
“Waqti adag ayaa lagu hayaa kheyraadka aadanaha marka loo eego kala duwanaanshaha kale ee hawlgalka. Shaqaalaha kale way fiican yihiin laakiin ma haystaan ​​fursado horumarineed. Dhaqdhaqaaqyo aan xirfad lahayn. ” runtii.com
"Waa suuq weyn, waxaan halkan uga shaqeynayay sidii madax -bannaan/webka dev muddo 5 sano ah kooxda taageerada ayaa ah waxa loogu baahan yahay suuq -geynta caalamiga ah."Makhjan-Ul Islam_trustpilot.com
"Waxay lacag aad u badan ka helaan faa'iidooyinkaaga, oo haddii aad si toos ah ugu shaqeyso waxaad fahantay dhaqannada ganacsi ee qallafsan ee ay sameeyaan si ay isugu dayaan una kordhiyaan xaddiga lacagta u timaadda shirkadda halkii ay ka ahaan lahayd qofka xorta ah."
XIDHIIDHKA: Dib -u -eegista Daacadda ah ee StartMiner 2022: Khiyaano kale oo Macdanta Bitcoin ah?
"Waxaan ka shaqeynayaa freelancer.com anigoo ah naqshadeeye garaaf ilaa iyo 2011 si aan u soo bandhigo, sanadahan aad bay ii caawisay inaan helo waayo -aragnimada caalamiga ah, sidoo kale waxay iga caawisay inaan la kulmo dadka kala duwan ee adduunka oo dhan." runtii.com
Beddelka Freelancer.com iyo Tartamayaasha
Freelancer waxay leedahay tartamayaal badan oo horeba isu caddeeyay inay yihiin ilaha waaweyn ee madax -bannaanida iyo dib -u -bixinta.
Si kastaba ha ahaatee, waxa goobaha shaqaaluhu ka siman yihiin ayaa ah baahida loo qabo in la dhiso faylalka faylalka waqti ka dib iyo in la horumariyo xiriirka macaamiisha si loo helo shaqooyinka ugu fiican uguna mushaarka badan.
Haddii aadan ku qanacsanayn adeegyada Freelancer, waxaad tixgelin kartaa suuqyada soo socda.
Haddii aad jeceshahay inaad wax qorto, waad jeclaan kartaa Qorayaashu Way Shaqeeyaan, Fiiri Faallooyinka Shaqada Qorayaasha
Shaqada Freelancing guud ahaan waa madadaalo laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa mid daal badan haddii aad iska qorto madal sax ah. Sidaa darteed iska ilaali qoraallada spam iyo codsadayaasha spam ee madal kasta oo u muuqda mid soo jiidan kara.
Laga soo bilaabo dib -u -eegistayada Freelancer.com, waxaad u tixgelin kartaa madal -sida ugu fiican si kastaba ha ahaatee, taasi ma baajiso xaqiiqda ah in mashaariic been abuur ah iyo dad ay ka jiraan aaladaha suuqgeynta. Hubi inaad xaqiijiso oo mashruuc sameyso ka hor intaadan bilaabin.
Dadku waxay kaloo weydiiyaan: Clickworker ma u qalmaa Mise waa khiyaano weyn?
Milkiilaha cusub ee Chelsea Hansjorg Wyss Net Worth: Qoyska, Samafalka, Da'da, Shirkadaha
Dib u eegista TradeGecko|Sharci ama khiyaamo|Sida ay u shaqeyso